Erdogan oo shaaciyey war culus oo ku aadan Shidaalka Somalia
NAIROBI(P-TIMES)- Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta shaaciyay in Soomaaliya ay Turkey ku casuumtay inay shidaal ka sahmiso baddeeda, kadib markii Ankara ay heshiis dhanka badda ah la gaartay Libya sanadkii tagay, waxaa sidaas weriyey taleefishinka NTV ee Turkey.
“Waxaa jira codsi ka yimid Soomaaliya. Waxay leeyihiin: ‘Shidaal ayaa ku jira baddeena. Waxaad howl-galladan ka fulineysaan Libya, balse waxaad sidoo kale ka sameyn kartaan halkan.’ Tani aad ayey muhiim noogu tahay,” Erdogan ayaa sidaas ka sheegay taleefishinka NTV.
DAAWO: Ganacsatada Puntland oo ka hadlay sababaha loo xiray Suuqyada & Canshuuraha lasoo rogay.
Madaxweynaha Iran oo eedeyn u jeediyey Maraykanka